Volaris inowedzera mamwe masere ndege yeA320 NEO kune ayo ngarava muna 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Volaris inowedzera mamwe masere ndege yeA320 NEO kune ayo ngarava muna 2021
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuwedzera chinzvimbo kuchaendeswa zvakanyanya kusimbisa chinzvimbo chendege mumusika wemuMexico
Volaris ave achikwanisa kutora mukana weiyo yakanaka yekurendesa mamiriro emusika
Volaris iri kuongorora mimwe mikana yemusika yekuwedzera dzimwe ndege
Ndege dzinoshanda nemafuta dzichaita kuti Volaris ishandise mikana yemusika muhafu yepiri yegore
Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, ndege inodhura-inodhura inoshumira Mexico, United States neCentral America, nhasi yazivisa kuwedzerwa kwevamwe vasere. Airbus Ndege yeA320 NEO kune yayo ngarava muna 2021, pamusoro pendege nhatu kubva pakutenga kwayo neAirbus, ichivhara gore nendege dzinosvika makumi mapfumbamwe nesere.
Volaris ave achikwanisa kutora mukana weakanaka marezenisi mamiriro emusika pasi pekuti idzi ndege dzinogona kuwedzerwa kuzvikepe, zvese pazvivakwa zvenguva refu. Vakwikwidzi vedu vanga vachidzikira pasi uye izvi zvaratidza mukana usingaenzaniswi weVolaris yekuwedzera chinzvimbo chine hutano.
Sezvo kubaya kwejekiseni kunowedzera mumisika yedu, kuvimba mukufamba nendege kwakawedzera zvinoenderana nekudaro Volaris ichave ichisanganisira dzimwe ndege sere dzeA320 NEO kuzvikepe zvadzo muna 2021 kuburikidza nemashandiro akanangana, mashanu acho achazoshanda muzhizha rino. Aya masimba ekuwedzera anozotumirwa kunyanya kusimbisa chinzvimbo chedu chinotungamira mumusika wemuMexico. Iyo Kambani iri kuongorora mimwe mikana yemusika yekuwedzera dzimwe ndege.
Idzi ndege dzinochengeta mafuta dzinogonesa Volaris kutora mukana wemusika museti muhafu yepiri yegore uye ichawedzera kuwedzera muzana yendege dzemhuri dzeA320 NEO mumakungwa ayo. Zvese izvi zvinoenderana nekambani nzira yekusimudzira yekusimbisa maindasitiri uye bhizinesi kuita mune ramangwana.